नेपालकै नमूना महानगरकाे सपना: ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दै भरतपुर (के-के बन्दैछन् त ? - Deshko News Deshko News नेपालकै नमूना महानगरकाे सपना: ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दै भरतपुर (के-के बन्दैछन् त ? - Deshko News
नेपालकै नमूना महानगरकाे सपना: ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दै भरतपुर (के-के बन्दैछन् त ?
चितवन, देशको मध्यभागमा रहेको भरतपुर महानगरपालिकाभित्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सेवासुविधा प्रदान गर्ने गरी ठूला पूर्वाधार निर्माणले गति लिन थालेको छ । महानगरप्रमुखमा निर्वाचित भएसँगै रेणु दाहाल भरतपुरलाई देशकै नमूना महानगर बनाउन स्वदेशी र विदेशी संघ संस्थासँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै अघि बढेका छन् ।
उनको अभियानलाई महानगरसमेत पर्ने चितवन क्षेत्र नं ३ का सांसदसमेत रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पनि साथ छ । प्रमुख दाहाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोगमा निर्वाचित भएका हुन् । उनको पार्टी माओवादी केन्द्र पूर्व एमालेसँग एकिकृत भैसकेकाले दाहाललाई काममा सहज पनि भएको छ ।
केही समय अन्योल बनेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रहेको रामपुरको जग्गामै बन्ने पक्का भएको छ ।
उक्त महानगरपालिका र धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनको सहकार्यमा उक्त रङ्गशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । सो कार्यकमा लागि जमीन उपलब्ध गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय तयार भएको महानगरप्रमुख दाहालले बताए । रु दुई अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर एशियाकै नमूना रङ्गशाला बनाउने योजनामा महानगरको छ ।
नक्साङ्कनका लागि प्राविधिक टोली आएर काम शुरु गरिसकेको नगरप्रमुख दाहालले बताउनुभयो । यथाशक्य छिटो विस्तृत अध्ययन गरी नक्साङ्कन गरेर बोलपत्र आह्वान गरिने छ । सो कार्यका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले रु ५१ करोड विनियोजन गरिसकेको छ भने अपुग रकम थप गरेर देशकै नमूना सभागृह हुने उनको जिकिर छ ।
महानगरपालिकाले नारायणगढ बजारको लायन्सचोकमा बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक भवन पनि बनाउँदै छ । विस्तृत अध्ययन गरी नक्साङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको इञ्जिनियर अस्मिता खनालले बताए । यथेष्ट पार्किङ सहितको १२ तले सो भवनका लागि करिव रु ८० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । भवन निर्माण भएपछि नारायणगढ बजार व्यवस्थित हुने अपेक्षा महानगरको छ ।
महानगरपालिकाले नारायणगढ नजिकै रहेको नगर वनलाई गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि महानगर प्रमुख दाहालले विज्ञसँग परामर्श भइरहेको बताए । नगर वनलाई स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने योजना महानगरको छ ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी गोपाल घिमिरेका अनुसार उक्त बाघले स्थानीयवासीका घरपालुवा जनावरमाथि आक्रमण गर्न थालेकोले निकुञ्जका प्राविधिक, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको दुई दिनको प्रयासपछि नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।